Qaabka iyo Goorta aad iska Qorayso Dugsi | Boston School Finder
Qaabka iyo Goorta aad iska Qorayso Dugsi
Ma jiro hal isdiiwaan gelin ama nidaamka codsi oo ka dhexeeya dhammaan 200+ dugsi ee kuyaala Boston. Waa kuwaan tillaabooyinka lagu codsan karo dhammaan noocyada dugsiyada kuyaala Boston iyo goorta aad u baahan tahay inaad dhammaystirto tallaabooyinkan sannad dugsiyeedka 2022-2023.
Bilaha Noofambar, Diisambar, iyo Janaayo 2021, dulmar kusamee waxyaabaha aad kala dooran karto.
Ka ogoow xulashooyinkaaga Dugsiga Dowliga ah ee Boston Charter halkaan www.applybostoncharters.com.
Arag 30+ degmo ee ka qaybgalaaya Barnaamijka METCO, kaasoo lagu baxsho qaab qori tuur ah, kadibna ku codso oonleenka inta lagu jiro afarta waqti ee codsiga qori tuurka METCO uu furan yahay:
Oktoobar 7 ilaa Diiseenbar 6, 2021
Diiseenbar 20 ilaa Feebaraayo 28, 2022
Maarso 3 ilaa Abriil3, 2022
Dib u eegis ku samee tayada xogta dugsigaoo booqo dugsi kasta ee aad danaynayso xaadiridiisa. Ayadoo loo sababaynayo safmarka socda,booqashada fool ka foolka ah ee dugsiyada waxaa dhici karta in aan laga heli karin dugsi kasta ee aad danayso. Qooysaska waxaa lagula talinayaa in ay la xariiraan si shaqsi ah dugsiyada ayadoo loo tixgalinayo awooda lasiinkaro booqashooyinka ama aragtiyada.
Bisha Janaayo, Febaraayo iyo Maarso 2022, iska qor oo codso dugsiyada ku jira liiskaaga.
Si aad iskaga diiwanagaliso Boston Public Schools, booqo barta DiscoverBPS.orgoola xariir Adeegyada Soo dhawaynta inta lagu jiro wareega diiwaangalinta muhiimada gaarka ah leh.
Diiwaangelinta mudnaanta leh ee ardayda gelaysa fasalada K0, K1, 6, 7, iyo ayaa bilaabanaaya Janaayo 5, 2022 kadibna xirmaysa Janaayo 28, 2022 kama dambaysta diiwaangelinta waxaa la kordhiyey ilaa Jimcaha, Febraayo 4, 2022.
Diiwaan gelinta muhiimada leh ee ardayda galaysa dhammaan fasalada kale (K2, 1-5, 8, 10-12) ayaa bilaabanaysa Feebaraayo 7, 2022 wuxuuna xirmayaa Abriil 1, 2022.
Si aad u codsato bakhtiyaa nasiibka Dugsiyada Dowliga ah ee Boston Chareter, halkaan oonleen ahaan oga buuxi codsiga www.applybostoncharters.org
Codsiga bakhtiya-nasiibka ah ee dugsiyada charter ku wuxuu furmayaa Oktoobar 1, 2021 wuxuuna xirmayaa Feebaraayo 28, 2022.
Si aad u hesho xog dheeraad ah oo faahfaahsan oo ku saabsan iska qorista dugsiyada BPS, fadlan booqo tusmadeena Xogta Qaabka la iskaga Diiwaangasho Dugsiyada Charter ka ah.
Bilaha Maarso, Abriil, iyo Maayo 2022, dib u eegis ku samee meelaynnada dugsigaaga oo go'aan ka gaar.
BPS waxay caadiyan ogaysiiyaan qoysaska ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6, 7, iyo 9 meelayntooda dugsiga bisha Maarso 31; dhammaan fasalada kale waxay helayaan meelayntooda dugsiga bisha Maayo 31.
Bakhtiyaa naasiibka dugsiyada dowliga ah ee boston charter wuxuu dhici doonaa 9, 2022. Dugsiyadaanu caadiyan waxay ardayda ogaysiiyaan natiijada bakhtiyaa nasiibkooda horaanta Maarso.
Marka laylisyada iskuulkaaga, natiijooyinka bakhtiyaa nasiibka, aqbalaada iskuulka, ogeysiisyada liiska sugitaanka, go'aamada kaalmada dhaqaale ay soo baxaan, waxaad tixgelisaa waxa mudnaanta koobaad u ah qoyskaaga iyo ardayga. Si taxadar leh u eeg inuu jiro wax xilli ah oo loo qabtay aqbalaadaada (Haddiiba ay jiraan). Keena Sida loo gaaro go'aankaaga ugu dambeeya ee ku aaddan Iskuulka Tusmeeye wuxuu kaa caawin karaa inaad noqotid mid diyaarsan inta aad gaareysid go'aankaaga ugu dambeeya.